East Africa Seasonal Monitor – September 10, 2020 – World – ReliefWeb | Somalia News
QM oo war cusub kasoo saartay doorashada Soomaaliya ee 2020/21
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Muqdisho (Caasimada Online) – Ergeyga gaarka ah ee xoghayaha Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan ayaa ka hadlay arrimo ku aadan xaaladda Somalia iyo doorashooyinka, kadib wareysi uu siiyey Tvga Al-Jazeera. James Swan ayaa wareysigan ku sheegay inay muhiim tahay doorashada soo socota lagu qabto waqtigii oo la asteeyey oo ah dhammaanka sanadkan iyo kan xiga ee 2021. Sidoo kale wuxuu ku baaqay in la dhaqan-geliyo heshiiskii ay Muqdisho ku gaareen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ku aadan doorashooyinka. Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya oo sii hadlayey ayaa shaaca ka qaaday in qorshaha uu yahay in dhammaadka sanadkan diyaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, isaga oo tilmaamay inay taasi tahay howsha ugu culus oo haddii laga gudbo doorashada madaxweynaha fududeyneyso. Ugu dambeyn wuxuu soo jeediyey jeediyay in si wadajir looga shaqeeyo ilaalinta nabad-galyada iyo in laga wada-shaqeeya doorashada oo afartii sanaba mar la qabto. Hadalkan ayaa ku soo aadaya, iyada oo weli is-mari waa uu ka taagan yahay arrimaha doorashada, gaar ahaan guddiyadeeda oo ay walaac ka muujiyeen midowga musharaxiinta. Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber
East Africa Seasonal Monitor – September 10, 2020 – World – ReliefWeb
East Africa Seasonal Monitor – September 10, 2020 – World ReliefWeb
Previous articleKoox Italy Oo Ah Gareth Bale Ka Soo Bad-baadiysa Ciqaabta Tababare Zidane
Next articleMaxaa hortaagan Jaamacada Carabta inay cambaareyso heshiiska Imaaraadka & Isreal?
Mekelle (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaraaha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ku dhowaaqay in ciidamada dowladda ay galeen magaalada Mekelle ee caasimadda gobolka Tigray, waxaa sidaas sheegay taleefishinka dowladda. “Waxaan awood u yeelanay inaan galno magaalada Mekelle ayada oo aan la beegsan goobo dadweyne,” waxaa sidaas Abiy Ahmed kasoo xigtay taleefishinka dowladda ee EBC. Taliyaha ciidamada militariga, Birhanu Jula ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada dowladda ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Mekelle, sida ku xusan qoraal uu soo dhigay barta militariga ee facebook. Bayaan kasoo baxay militariga ayaa sidoo kale lagu sheegay inay gacanta ku hayaan garoonka diyaaradaha magaalada, dhammaan xaruma dowladda, iyo xarunta taliska waqooyi ee ciidamada federaalka. Waxay sidoo kale sheegeen inay sii daayeen taliyayaal ka mid ah taliska ciidamada waqooyi oo u xirnaa TPLF. Ciidamada dowladda ayaa goor sii horreysay oo maanta ah duqeyn xooggan iyo weerar culus ku qaaday magaalada, oo ay ku nool yihiin in ka badan 500,000 oo qof. Way adag tahay in si madax-banaan loo xaqiijiyo sheegashada dowladda. Sidoo kale, kooxda TPLF ee maamusha Tigray weli kama hadal. Hoggaamiyaha TPLF, Debretsion Gebremichael waxa uu horey u sheegay in qabsashada Mekelle aysan la macno noqon doonin in dagaalka uu dhammaaday, taasi oo loo fasirtay inay billaabi doonaan dagaal jabhadeyn ah. Boqolaal qof ayaa lagu dilay, kumanaan kalena waa ay ku barakaceen dagaalka oo ra’iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku dhowaaqay, 4-tii November, kadib markii uu sheegay in ciidamada TPLF ay weerareen saldhig militari, oo ay ku sugnayaeen ciidanka dowladda.